Global Voices teny Malagasy » India: Ny Fitondran’ireo Taranakà Mpanao Pôlitika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2018 20:56 GMT 1	 · Mpanoratra Javits Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, India, Pakistana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Mbola velona ve ny demôkrasia? Izany no fanontaniana mbola mitoetra anatin'ny lalao pôlitika ataon'ity zana-tanibe ity momba ny fandovàna. Nanana ny mpanjakanay sy ny mpanjakavavinay izahay, saingy mbola tsy afa-mitsahatra manompo ireo mpanjaka ara-pôlitika vaovao sy ny fianakavian-dry zareo izahay. Maty nisy namono ny vehivavy iray mpitarika tao Pakistàna ny 27 Desambra 2007 ary ora vitsy taorian'ny nandaozany ny fiainany ara-pôlitika sy ara-batana, nofidina handimby azy ny zanany lahy. Manontany i Sirensongs, avy ao amin'ny ‘Feringhee: Ny Diarin'i India ‘.
Mamerina ny teny avy amin'ny Indian Express  i Sirensongs milaza fa: “Novaina ho demôkrasia ny fitondram-panjaka tany Azia Atsimo.” Mamolavola ny tenantsika ho repoblikana isika rehefa nanome lamosina ny fitondran'ny mpanjaka. Kanefa matetika, tsy vanona sy marefo izany fisainana repoblikana izany, satria karazanà fitondran'ny mpanjaka kely izay samy manana ny fianakavian'ny mpanjakany ny antoko pôlitika ao amin'ny governemanta demôkratikantsika. “ Arahany amin'ny fijeriny manokana izany.
Ao amin'ny India View , tsy miraika amin'ny toedraharaha pôlitika ao Azia Atsimo i S. Venikar, nefa mangoraka ny printsy ‘Bilawal’ sy ny lovany.
Anatinà lahatsoratra nivoaka teo aloha, mitondra ny lohateny hoe “De'mo-narchy Of India” , miteny i Venikar fa ireo mpanao pôlitika vaovao izay manararaotra ny fametrahana ny demôkrasia hamoronana fitondranà taranakà mpanao pôlitika no tena tokony hatahorana hanimba ny demôkrasia Indiana.
Matahotra i Patrick Pringle noho ny fitoviana misy eo amin'ny olana iainan’i Bilawal, zanak'i Bhutto, sy ny an'i Gandhi. Maneho ny heviny momba ity olana mihitatra ity avy any Londona izy ao amin'ny bilaoginy Patrick's South Asia Diary  (rohy tsy mandeha).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/30/117190/
 Feringhee: Ny Diarin'i India: http://sirensongs.blogspot.com/2008/01/family-affair.html
 India View: https://indiaview.wordpress.com/